कस्तो सम्पत्ति कर ? | Nepal Tax Online | Tax Resource, Expertise & Insights
कस्तो सम्पत्ति कर ?
मूल्यवान् कम्पनी खडा गरेका उद्यमीले सम्पत्ति कर तिर्दा उनीहरूको सम्पत्ति घट्छ र उनीहरूले उद्यमशील प्रयास गर्न छोड्छन् भन्ने तर्क विश्वसनीय छैन
सम्पत्तिमाथि व्यापक कर लगाउने प्रस्ताव नयाँ होइनन् । यद्यपि ती प्रस्तावले अमेरिकामा पुनः ध्यानाकर्षण गर्न थालेका छन् । लगातार बढ्दो आय र सम्पत्ति असमानताले सामाजिक एवं नैतिक चासो बढाएको छ । यसबाट धनाढ्यसमेत चिन्तित छन् । यस प्रवृत्तिसँगै सामाजिक गतिशिलतामा आएको कमीले राजनीतिक धु्रवीकरणमा योगदान दिइररहेको छ । यसले अन्ततः अनपेक्षित एवं कमजोर नीति छनोटतर्फ डोर्‍याउनेछ । साथै, बढ्दो असमानता र घनिभूत भनिरहेको सामाजिक एवं राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट नाटकीय र हिंसात्मक परिणामसमेत निम्तिन सक्ने इतिहासले देखाइदिएकै छ ।
सौभाग्यवशः आय तथा सम्पत्ति असमानताको गम्भिरता, आयाम, इतिहास र मार्गमाथि प्राथमिक अध्ययन गर्ने संस्था बढिरहेका छन् । कुनै समस्या सम्बोधनका लागि कुनै प्रकारको कर नीतिको माग बढ्दै गयो भने कुन कर सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण वास्तवमा त्यसको विशिष्ट उद्देश्यमा निर्भर गर्छ ।
डेमोक्र्याटिक पार्टीका राष्ट्रपति पदका प्रत्याशी उम्मेदवारका कुरा सुन्दा फरक–फरक सम्पत्ति करका उद्देश्य पनि फरक–फरक हुन्छन् जस्तो लाग्छ । बर्नी स्यान्डर्स ‘अर्बपति अस्तित्वमै रहनु हुन्न,’ भन्छन् । उनका लागि चरम असमानता आफैँमा अपराध हो । अरूचाहिँ तल्लो आधा वा दुईतिहाइ हिस्साका नागरिकका लागि सम्पत्ति तथा आय असमानताले के अर्थ राख्छ, त्यसमा बढी केन्द्रित छन् । उदाहरणका लागि एलिजावेथ वारेनलाई लिऔँ, उनी सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य सेवाको महत्वाकांक्षी विस्तारका लागि धनीमाथि कर लगाउन चाहन्छिन् ।
सम्पत्ति कर आधारभूत रूपले एउटा लेबी नै हो, जसले लगानीको प्रतिफल घटाउँछ । सम्पत्तिमा लगाइने ३ प्रतिशत करले कर लगाउनुपूर्व १० प्रतिशत रहेको लगानीको प्रतिफललाई ७ प्रतिशतमा झार्छ । र, त्यो प्रतिफल आम्दानीमा परिवर्तन हुँदा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यसैगरी, यदि ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने करपूर्वको प्रतिफलमा लागू हुने यस खाले कर ६० प्रतिशत करबराबर हुन्छ भने करपूर्वको प्रतिफलमाथि लागू हुने २० प्रतिशत कर १५ प्रतिशत करबराबर हुन्छ । त्यो धेरै ठूलो फरक हो । यी उदाहरणले देखाएजस्तै सम्पत्ति कर स्थिर हुँदा लगानीको प्रतिफलमा लगाइने करको परिमाण अनुपातिक रूपले घट्छ भने करपूर्वको प्रतिफलमाथिको करको आकार बढ्छ ।
यसबाहेक धनाढ्य व्यक्तिसँग सामान्यतयाः व्यापक दायराका सम्पत्तिमा पहुँच हुन्छ । तत्काल तरल बनाउन नसकिने खालका सम्पत्तिमाथि उनीहरूकै बढी पहुँच हुन्छ । विभिन्न नियामनकारी अवरोध र प्रतिफलका लागि निश्चित अवधि पर्खनुपर्ने ‘इलिक्विडिटी प्रिमियम’ का कारण यस वर्गका सम्पत्तिको करपूर्वको प्रतिफल बढी हुन सक्छ । यस्तोमा, ५० करोड डलरको सम्पत्तिमाथि २ प्रतिशत र १ अर्ब डलर सम्पत्तिमाथि ३ प्रतिशत कर (वारेनले प्रस्ताव गरेअनुसार) त्यति धेरै भएजस्तो लाग्दैन । ५० करोड डलरको बेन्चमार्कले अधिकांश मानिसको खर्च गर्ने क्षमतालाई सीमित पनि गर्दैन । साथै, यसले उनीहरूलाई लगानी प्रतिफलमा तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील कर कम लाग्ने उच्च प्रतिफल दिने तरल सम्पत्तिमा लगानी गर्ने स्वतन्त्रता पनि दिन्छ ।
मौजुदा व्यवस्थामा विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि छ । लगानीको प्रतिफलमा जतिपछि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ लगानी प्रतिफलमा लगाइने त्यस्तो कर उत्तिकै उल्लेख्य रूपले घट्दै जान्छ । त्यसैले धनाढ्य व्यक्तिहरूमा मूल्यवान् कम्पनीमा रहेको आफ्नो सेयर स्वामित्व लामो समयसम्म कायमै राखिराख्ने र पुँजीगत लाभ करलगायत सम्पत्ति करबाट लामो समय बचिरहन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति दान गर्ने वा गरेको अवस्थामा त कहिले कर तिर्छन् त्यसको कुनै निश्चितता हुँदैन । उदाहरणका लागि यदि वास्तविक आम्दानीमाथिको कर ३० प्रतिशत हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिको करपूर्वको प्रतिफलमा लाग्ने कर १५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैगरी, वास्तविक प्रतिफलको गणना २५ वर्षसम्म नगरिँदा त्यस्तो प्रतिफलमाथि लाग्ने कर (इफेक्टिभ ट्याक्स) घटेर साढे १० प्रतिशत मात्रै हुन्छ । २५ वर्षको स्थगन अवधिले करको दरलाई दुईतिहाइ घटाउनुका साथै र करपछिको सम्पत्तिको मूल्य झन्डै दोब्बरसमेत बनाइदिसकेको हुन्छ ।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा कर भुक्तानीको स्थगनले प्रभावकारी करको दरमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्छ । शीर्ष ५ प्रतिशत धनाढ्यहरूमा यस्तो अभ्यास रहेको छ । यद्यपि सम्पत्ति करलाई पन्छाउन कठिन हुन्छ । वास्तविक बजार मूल्य नभएका धेरै सम्पत्तिमाथि कब्जा राखिराख्नु त्यत्ति सजिलो हुन्न । व्यवहारमा भने सम्पत्ति कर सम्पत्तिको हालको वास्तविक मूल्यमाथि लगाइन्छ भने भर्खरैका लगानीमा केही कर छुटको व्यवस्था पनि हुन्छ । साथै, लगानीको प्रतिफलमाथि लगाइने कर वास्तविक प्रतिफलमा लगातार लगाइन्छ ।
सम्पत्ति कर स्थगन (डिफरेवल) गरिरहन नसकिने भएकाले र यसको प्रभाव करपूर्वको प्रतिफलमा निर्भर हुने भएकाले सामान्य सम्पत्ति कर हालको व्यवस्थामा रहेको लगानीको प्रतिफलमा लगाइने प्रभावकारी करको दरभन्दा थोरै मात्रै बढी हुन सक्छ । नयाँ सम्पत्ति करको विरोध गर्नेले अझै पनि यसको विरोधमा थुप्रै तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एकपटक सम्पत्ति कर लागू भएपछि समयक्रमसँगै सो बढ्दै जान्छ भन्ने तर्क एकथरीको छ । तर, पछिल्ला दशकमा अमेरिकामा आय कर दर ओरालो लाग्दै गरेको सन्दर्भले यस तर्कलाई समर्थन गर्दैन ।
यस सम्पत्ति करको कारण उत्पादकत्व, आर्थिक बृद्धि एवं रोजगारी चपेटामा आउँछ भन्ने दोस्रो दाबी छ । तर, मूल्यवान् कम्पनी खडा गरेका उद्यमीले सम्पत्ति कर तिर्दा उनीहरुको सम्पत्ति घट्छ, र उद्यमशील प्रयास गर्न छोड्छन् भन्ने कुरा विश्वसनीय छैन ।
यस आलेखमा उल्लेख गरिएको १ अर्ब डलरभन्दा माथिको सम्पत्तिको लाभमा लाग्ने सम्पत्तिको प्रतिफलमाथिको प्रगतिशील करले ती धनाढ्यको उपभोग तथा जीवनशैलीसँग खासै अर्थ राख्दैन । उपभोग र जीवनशैली त उनीहरूको सफलता र सामाजिकस्तरका सूचक हुन् । सम्पत्ति करले उनीहरूको सम्पत्तिको स्तरलाई समायोजन गर्न सक्छ, तर यसले उनीहरूको समग्र क्रमसूचीमा भने परिवर्तन गर्न सक्दैन ।
अन्ततः केहीले सबै सम्पत्ति आफ्नै बलबुतामा कमाएकाले त्यो आफैँसँग राख्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । तर, यस तर्कले वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेको छ । अमेरिकामा सफल सबै व्यक्ति एउटा व्यापक प्रणालीका लाभग्राही हुन्, त्यसै प्रणालीले उनीहरूको सफलताका लागि स्रोत एवं अवसर जुटाइदिएको हो । असमानतामाथिको विमर्श तातिरहेको छ ।
धनाढ्यहरूको एउटा प्रभावशाली समूहले सामान्य सम्पत्ति कर (मोडरेट वेल्थ ट्याक्स) को वकालत गर्न थालेको छ । प्रस्तावित यस करलाई, कमाउने समूहका तल्ला ५० प्रतिशतलाई उपलब्ध अवसर विस्तारित गर्ने गरी तयार गरिएको छ । यो कर कसरी सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमा मतैक्य छैन । कम आय भएका परिवारलाई सिधैँ आय हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) वा शैक्षिक तथा रोजगारीलक्षित सामाजिक सेवाका कार्यक्रममा सार्वजनिक कोषको विस्तारमध्ये कुन तरिकाले उत्कृष्ट हुन्छ भन्नेमा दुईमत छ ।
यो महत्वपूर्ण विमर्श होला, तर यो छुट्टै मुद्दा हो । जेसुकै भए पनि वर्तमान सामान्य सम्पत्ति करको प्रस्तावमा गम्भीर ध्यानाकर्षणको आवश्यकता छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा विद्यमान अनिष्टकारी वितरण (सम्पत्ति तथा आय) लाई सम्बोधन गर्ने उत्तम एवं खराब दुवै तरिका होलान् । तर, केही नगर्नुचाहिँ सबैभन्दा खराब विकल्प हो ।
अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त स्पेन्स न्युयोर्क युनिभर्सिटीको स्टर्न स्कुल अफ बिजनेसमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र हुभर इन्स्टिच्युसनका सिनियर फेलो हुन् ।
(मिति २०७६ कार्तिक १७ आइतबार नयाँ पत्रिका मा प्रकाशित यो समाचार साभार गरिएको हो एवं नयाँ पत्रिका को यो लिंकमा गई पढ्न सकिनेछ । यो लेखमा व्यक्त रायमा नेपाल ट्याक्स अनलाइनको कुनै संग्लग्नता रहेको छैन । )